Istaraatijiyadaha Dilaya Mawduucaaga Suuqgeynta #CONEX | Martech Zone
Shalay waxaan la wadaagay inta aan ka bartay dhisida istiraatiijiyadda ABM ee CONEX, oo ah shir ka dhacaya Toronto oo ay la leedahay Uberflip. Maanta, waxay ka joojiyeen joogsigii oo dhan iyagoo keenay suuq-geyn kasta oo suuq-geyn ah oo warshaduhu bixin lahaayeen - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, iyo Scott Stratten si ay u magacaabaan inyar. Si kastaba ha noqotee, feejignaanta ma ahayn waxyaabahaaga caadiga ah sida loo-toosiyo iyo talooyinka.
Waa ra'yigayga kaliya, laakiin dooda maanta waxay ahayd mid aad uga badan oo ku saabsan daacadnimada sida aad u horumarinayso waxyaabahaaga - laga bilaabo nidaamka, illaa iyo sida hufan ee aad u tahay, sida aad u falanqeyneyso dhagaystayaashaada, illaa iyo anshaxa ganacsigaaga.
Dooda ayaa kubilaabatay Aasaasaha Uberflip Randy Frisch Wadaagista tirakoob cabsi leh iyo rajo leh oo ku saabsan waxyaabaha ku jira. Wuxuu adeegsaday isbarbardhig qurux badan (oo dhammaystiran fiidiyowga) wiilkiisa oo isku dayaya inuu ku ciyaaro heesta Justin Bieber taleefanka gacanta, Sonos, iyo Google Home. Mid kaliya ayaa bixiyay fulintii degdegga ahayd - Guriga Google. Isbarbardhigga: Wiilka Randy wuxuu raadinayey nuxur laga heli karo dhammaan nidaamyada, laakiin mid uun baa ka dhigay fudud in la helo oo la dhageysto.
Kani waa adduunyada aan ku nool nahay dhibicduna maalintii oo dhan guriga ayaa loo waday.
Tamsen - si faahfaahsan u galay horumarinta a Mawduuca Remix Matrix kaas oo bixiya macluumaadka dhisaya buundada u dhaxaysa rajadaada iyo adigaba. Waxay si faahfaahsan ujeeddooyinka, dhibaatooyinka, runta, isbeddelada, iyo falalka lagama maarmaanka u ah si ay u gaaraan dhagaystayaasha in.
Scott - soo bandhig riwaayad madadaalo iyo qosol leh oo tilmaamaysa sida anshax xumadu ugu jirto suuqgeynta, halkaas oo shirkaduhu gaysteen tabo xeeladeysan (sida afduubka wararka oo qaldamay) si ay u gaaraan guulo muddo gaaban ah iyagoo baabi'inaya sumcadooda. Sida Scott u dhigay:
Anshaxa iyo hufnaanta ma aha ilo dib loo cusboonaysiin karo.
Marcus - ku soo bandhig bandhig aan iin lahayn, dab-damis degdeg ah oo ina xusuusiyay in runta iyo daacadnimada ay tahay waxa macaamil kasta uu doonayo marka uu macluumaad ka raadinayo boggaaga, laakiin marar dhif ah ayay ka helaan macluumaad muhiim ah (sida qiimaha). Wuxuu sharaxaad ka bixiyay sida aad uga jawaabi karto su'aasha si daacad ah, oo qoto dheer, iyadoo aanad khatar gelinayn shirkaddaada. Hase yeeshe, waxa uu muujiyay sida aad ugu istaagi karto meheraddaada si fudud adoo ka jawaabaya su'aalaha rajadaadu ay raadineyso internetka.
Jacaylka uu muujiyo qof kasta oo hadlaa maanta wuxuu u sheegay isla sheekada ers Suuqleyda waxyaabaha ku ganacsanaya waxay ganacsigooda ku dilayaan liidasho, waaya aragnimo daciif ah oo aan si fudud irbadda u dhaqaajinayn. Dhammaan inta macaamiisha iyo ganacsatadu ay baarayaan isla markaana wadaan maalin walba safarrada macaamiishooda. Markay shirkaduhu si sax ah u sameeyaan, waxay awood u siinayaan macaamiishooda inay u qalmaan oo ay xiraan iibka iyada oo aan wax isdhexgal ah lahayn. Laakiin markay shirkaduhu khalad sameeyaan, inta badan ilaha cajiibka ah ee ay maalgashadaan maaddada way lumaan.
Markaan u horumarinayno macaamiisheenna, waxaan si cad u sheegayaa in wax-soo-saarka dhabta ah la bixin karo uu yahay oo keliya toban meelood meel shaqada. Waxaan u adeegsanaa cilmi baarayaasha, sheekooyinka, naqshadeeyayaasha, sawir qaadayaasha, animators, iyo ilo kale oo muhiim u ah soo saarida waxyaabaha. Waxaan baareynaa dhexdhexaadiyeyaasha iyo dhagaystayaasha meesha la dhigayo oo aan kor u qaadno. Waxaan falanqeyneynaa tartanka, ganacsiga, kuwa go'aanka gaara, iyo dhinac walba oo safarku u egyahay kahor furitaanka weedha koowaad.
Waa ciyaartii dheereyd. Uma ciyaareyno hits, waxaan u ciyaareynaa orodyo… inaan guuleysano. Iyo si loo guuleysto, suuqleyda waa inay hubiyaan in shirkadooda loo arko inay yihiin daacad, aamin, awood, iyo diyaar u ah inay adeegaan. Markaan si sax ah u sameyno, waan guuleysanaa mar kasta.
Ma jirto waddo aan ku dhammayn karo qoraalkan maalinta CONEX anigoon xusin Khilaafka Mawduuca. Iyada oo martida loo yahay ee Jay Baer, ​​kalfadhigan wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu qosolka badan, waxqabadyada ugu hal abuurka badan ee aan abid goobjoog ka ahaa shir. Bravo u samee CONEX soo saarista cajiibkaas waayo-aragnimo.
Tags: Ann Handleywada noolaanshoshirka waxyaabaha ku saabsananshaxadaacadnimoDaacadnimoJay BaerMarcus Sheridanshirka suuq geyntaScott dhunsanTamsen Websterisku dhacaruntauberflip